के कार्तिक आर्यनको प्रेममा छिन् श्रद्धा ? - Janabato
के कार्तिक आर्यनको प्रेममा छिन् श्रद्धा ?
२०७५ मङ्सिर ७ गते शुक्रबार ०३:५४ मा प्रकाशित
२ बर्ष, ४ महिना, २ हप्ता अगाडि
३२९ जनाले हेरिएको
बलिउडमा कलाकारको प्रेम चर्चा सधै नै चल्छ । कलाकारको सम्बन्ध जुटेका र टुटेका खबर बलिउडका लागि ठूलो बिषय नै हुन छाडेको छ । अहिले बलिउडकी एक चर्चित नायिकाको प्रेम सम्बन्धले फेरि बलिउड मिडिया गर्माएका छन् । नायिका श्रद्धा कपुरलाई एक नायकसँग मध्यरातमा चलचित्र हेर्न पुगेको भेटेपछि भारतीय मिडिया गर्माएका हुन् ।
नायिका श्रद्धा कपुरको प्रेमको खबरमा खासै परेको पाइदैन । तर, यसपटक भने उनी र नायक कार्तिक आर्यनको नाम जोडिएको छ । कात्तिक र श्रद्धा मध्यरातमा चलचित्र हेर्न मुम्बइको एक हलमा पुगेका थिए । दुई जनासँगै चलचित्र हेर्न पुगेको खबर छापिएसँगै उनीहरुको प्रेमको खबर पनि मौलाएको छ।
उनीहरुलाई केही समय अगाडि डिनर डेटमा पनि भेटिएको मिडियाले उल्लेख गरेका छन् । श्रद्धा कपुर र कार्तिक आर्यनले चाडै नै एउटा चलचित्रमा काम गर्न लागेको समेत खबर सार्वजनिक भएको छ ।
केमियो भूमिकाले वेनिशालाई फाइदा होला ?
निद्रा हरायो ? यसरी लिने गहिरो र मिठो निद्रा
पाहुनाकै अगाडि दिपिका र रणवीरको रोमान्टिक मुड